Publications – Myanmar Livestock Federation
Leading Myanmar Livestock Sector
(+95) 13 644041
MFF Building, Bayint Naung Road,West Gyogone, Insein , Yangon,Myanmar.
Myanmar Livestock Sector
Myanmar Livestock Federation issues its monthly newsletters for its members and other livestock owners around the country. MLF Newsletter provides current technical information to improve productivity, profitability and sustainability of the livestock production in Myanmar. It can available as digital version online and free of charge.
မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် အဖွဲ့ချုပ်ဝင်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ မွေးမြူရေးသမားများထံသို့ နည်းပညာဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ "မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ် သတင်းလွှာ" ကို လစဉ် ဖြန့်ဝေပေးလျက်ရှိပါသည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၏ ထုတ်လုပ်မှု မြင့်မားရေး၊ အမြတ်အစွန်း တိုးတက်ရရှိရေးနှင့် ရေရှည်တည်တန့်သော ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုများကို ရည်သန်လျက် သတင်းလွှာ ကို လစဉ် ဒီဂျစ်တယ် version ဖြင့် ဖြန့်ဝေပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Newsletter Archive (Download)
အမှတ် ၁ (ဇွန်လ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်)
အမှတ် ၂ (ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်)
အမှတ် ၃ (သြဂုတ်လ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်)
အမှတ် ၄ (စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်)
အမှတ် ၅ (အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်)
အမှတ် ၆ (နိုဝင်ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်)
အမှတ် ၇ (ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်)
အမှတ် ၈ (ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်)
အမှတ် ၉ (ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်)
အမှတ် ၁၀ (မတ်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်)
အမှတ် ၁၁ (ဧပြီလ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်)
အမှတ် ၁၂ (မေလ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်)
အမှတ် ၁၃ (ဇွန်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်)
အမှတ် ၁၄ (ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်)
အမှတ် ၁၅ (သြဂုတ်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်)
အမှတ် ၁၆ (စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်)
အမှတ် ၁၇ (အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်)
အမှတ် ၁၈ (နိုဝင်ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်)
အမှတ် ၁၉ (ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်)
အမှတ် ၂၀ (ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)
အမှတ် ၂၁ (ဖေော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)
အမှတ် ၂၂ (မတ်လ၊ ၂၂၀ ခုနှစ်)
MLF also publishes technical handbooks and other documents to educate its members. Those technical documents can be available online free of charge.
မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် အဖွဲ့ချုပ်ဝင်များ နည်းပညာ အကူအညီရရှိရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး နည်းပညာဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများ၊ လက်စွဲစာအုပ်များ၊ ပညာပေးစာစောင်များကိုလည်း ဖြန့်ဝေပေးလျက်ရှိပါသည်။ ယင်း နည်းပညာစာတမ်း၊ စာစောင်များအား အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါသည်။
သိုး၊ ဆိတ် မွေးမြူရေး စီမံခန့်ခွဲမှု အခြေခံလက်စွဲ (Handbook on Small Ruminant Production)
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှု လက်စွဲ (Disaster Management Guidelines)
Sanitation Performance Standards for Slaughter Houses in Myanmar
မွေးမြူရေးခြံများအတွက် ဧည့်အဝင်/အထွက် မှတ်တမ်း
ကြက်-ငါး မွေးမြူထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများး
The Myanmar Livestock Federation is an NGO in the livestock sector and founded on October 24, 1999. Currently, it has 18000 members registered from all over the country.
(+95) 13644041, 13644843
Copyright © 2020. All rights reserved by Myanmar Livestock Federation.
Powered by Graphic Design Company in Myanmar